सिभिल बैंकले तीन पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न महिलालाई ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने « Artha Path
सिभिल बैंकले तीन पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न महिलालाई ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने
प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७६, आईतवार
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले महिला ग्राहकहरुलाई तिन पांग्रे सवारी किन्न ७० प्रतिसतसम्म कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । आज सिभिल बैंक र विवेक अटोमोवाईल्स् बिच व्यबसायीक सहकार्य सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ तथा विवेक अटोमोवाईल्स्का तर्फबाट अध्यक्ष विवेक दुगडले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौतापत्र अनुसार विवेक अटोमोवाईल्स्बाट पियाजियो ब्राण्डका तीन पाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न महिला ग्राहकहरुलाई विवेक अटोमोवाईल्स्को सिफारिसमा सिभिल बैंक लिमिटेडले ७० प्रतिशतसम्म ४ वर्षे कर्जा सुबिधा प्रदान गर्ने छ । सो कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ६% व्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरुद्वारा संचालित व्यवसायिक फर्महरुलाई प्रदान गरिने छ । सो अनुदान पछि वार्षिक व्याजदर ६.९८% मा सो कर्जा सुबिधा प्रदान गरिने छ ।
हालसम्म ४३०,००० भन्दा बढी ग्राहकहरु रहेको करीव रु. ५४ अर्व भन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी करीव रु. ५२ अर्व कर्जा लगानी गरेका छ भने सिभिल बैंकको ११२ वटै शाखाहरु मार्पmत यो कर्जा सुबिधा प्रदान गरीने पनि बैंकले जनाएको छ ।
शक्तिशाली, स्टाइलिश, नवीनताको सम्मिश्रणः भी२३ सिरिज
काठमाडौं । अहिलेको समयमा, शक्तिशाली विशेषताहरू भएका उपकरणले सबैको ध्यान खिच्दछ । त्यसैले ब्रान्डहरू प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । ग्लोबल टेक्नोलोजी लिडर शाओमी ले शाओमी एस् १ एक्टिभ, रेड मि स्मार्ट ब्यान्ड
गाडी भाडा फेरि ३ प्रतिशत बढ्यो, अब कुन रुटको कति ?
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबढेपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि बढेको छ । एक हप्तामा २
रियलमी जिटी नियो ३ को DXOMARK चार्जिङ टेस्ट ईतिहासमा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा छिटो अघि बढिरहेको स्मार्टफोन ब्राण्ड रियलमीले DXOMARK चार्जिङ टेस्ट ईतिहासमा नयाँ